बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया यस्तो छ- – Nepal News
बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया यस्तो छ-
काठमाडौं, जेठ १६ । पूर्वअर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आ व २०७५ ७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनुपर्नेमा एक चौथाई मात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आशाजनक संस्थागत परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम नआई पुरानोको निरन्तरता देखिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना आवश्यक कार्यक्रम देखिएन ।
बाहिरी लगानी भित्र्याउने र भित्री लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “उद्देश्यमा स्पष्टता छ, आर्थिक वृद्धिको दरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैन, नयाँ योजना नल्याएकाले व्यवहारिक देखिन्छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट कनिका छरेजस्तो भएको भन्दै मौलिकता नभएको, प्रदेशलाई कर संकलनको अधिकार नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस्तै, बजेटबारे निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बोलेको बजेट सकारात्मक नै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।